Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Daawo Meherkii ugu waalli casaa dunida oo dalka Hindia ka dhacay “Naag nin ka Yarad bixisay iyo ninkii oo diidan oo khasab loogu tu’inayo”
Daawo Meherkii ugu waalli casaa dunida oo dalka Hindia ka dhacay “Naag nin ka Yarad bixisay iyo ninkii oo diidan oo khasab loogu tu’inayo”
Dec 05, 2012 SOMALI NEWS 1
Nin gabadh uusan doonayn reerkoodu ku dirqinayo iyo gabadha oo ku faraxsan.
Su’aalaha in laga jawaabo u baahan waxa ka mid ah :
Haddiiba meherka loo wada joogay oo xoog lagu mariyay sariirta miyaa loo wada joogi doonaa?
Su’aashaa iyo suaalo kale oo badan baa jira.
Xildhibaanada Burco iyo Beelaha ay Kasoo Kala jeedaan iyo Sida ay Reer Burco ururada u kala xusheen !!!!!!!!!!!!!!! DAAWO VIDEO Waxa qabsaday Ninkan Sixiroolaha ah oo Sameeya Indho Sarcaadka Oo Bandhig Tv- Oo Si Toos Ah Hawada Uga Socday Madaxa Dab Ka Qabsaday
One thought on “Daawo Meherkii ugu waalli casaa dunida oo dalka Hindia ka dhacay “Naag nin ka Yarad bixisay iyo ninkii oo diidan oo khasab loogu tu’inayo””
Anonymous 12/08/2012 at 10:45 pm